TRONSMART एनकोर स्पन्की बुड हेडफोन समीक्षा, डिजाइन र मूल्य | ग्याजेट समाचार
फेरि हामी एक्युलिडाड गाजेटमा प्राप्त गरेका छौं ध्वनी सम्बन्धित एक उपकरण, केहि हेडफोनहरू। को TRONSMART एनकोर स्पन्की बुडहरू। केहि TWS (True Wiereles Sound) टेक्नोलोजीको साथ वायरलेस हेडफोन ध्वनी सामानको क्षेत्रमा राम्रो प्रतिष्ठाको साथ फर्म द्वारा निर्मित।
हामीले यी हेडफोनलाई परिक्षणमा राख्यौं केहि हप्ताको लागि र हामी तपाईंलाई बताउन जाँदैछौं कि भेट्यौं हामीले के भेट्यौं। यसको डिजाइनबाट, यो बजारमा कुनै अन्य हेडफोनबाट प्रेरित भएको देखिँदैन, जुन हामी मनपराउँछौं। सम्म यसको प्रदर्शन र प्राविधिक पक्षहरू त्यो सामान्यतया उनीहरु लाई राम्रो ग्रेड.
1 ट्रान्समार्ट स्पन्की बुड, हेडफोन "जानु"
3 वर्तमान डिजाइन र शैली
4 एर्गोनोमिक्स र अधिक
5 शक्तिशाली ध्वनि र अधिक
6 प्राविधिक विवरण तालिका
7 पेशेवर र ट्रान्समार्ट ईन्कोर स्पन्की बुडको विपक्ष
ट्रान्समार्ट स्पन्की बुड, हेडफोन "जानु"
यदि तपाईं दिनभरि तल तल हुनुहुन्छ र रोक्नुहुन्न भने, तपाईं जहाँ भए पनि वायरलेस हेडफोनहरू तपाईंको संगीतको मजा लिन राम्रो उपाय हो। यदि तपाइँ आउटडोर खेलहरू पनि मनपराउँनुहुन्छ भने, ट्रान्समार्ट स्पन्की बुडहरू तपाइँको संगीत बोक्नको लागि एक सहायक सहायक हुन् जब तपाइँ रनको लागि जानुहुन्छ।
तपाइँको संगीत सँधै तपाइँको कानमा हुनुको साथै, तपाईं प्राप्त र कल गर्न सक्नुहुन्छ। र बोनसको रूपमा तपाईले गुगल सहायक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ दुईमा दुईवटा हेडफोनमा पछाडि दुई पटक मात्र छुनु।
को अवधारणा बक्स / चार्जरको साथ हेडफोन यो पहिले नै सामान्यको रूपमा स्थापित छ। र हामी यसलाई राम्रो चीजको रूपमा लिन सक्छौं। किनकि हाम्रो हेडफोन राख्नुका साथै तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुका साथै हामी तिनीहरूलाई जहाँसुकै लोड गर्न सक्दछौं जब हामी मामलामा राख्छौं। केबल वा चार्जरको आवश्यकता बिना अधिक प्रयोगको घण्टा।
हामी सबैलाई थाहा छ, हेडफोन स्वायत्तता द्वारा स्मार्टफोन सहायक हो। त्यहाँ धेरै धेरै र धेरै विविध छन्। तर हेडफोन अझै पनि सबैभन्दा धेरै मागको रूपमा हो। Y अब यसको विशाल बहुमत वायरलेस र ट्रु वायरलेस साउन्ड टेक्नोलोजीको साथ.
ट्रोनमार्ट स्पन्की बुडले मार्केट मार्फत प्रस्ताव राख्यो चाखलाग्दो विकल्प। बाट सुरू गर्दै वास्तवमै प्रतिस्पर्धी मूल्य तिनीहरू आफ्नो निर्माण सामग्रीमा गुणवत्ता प्रदान गर्न सक्षम छन्। Plus राम्रो आवाज र राम्रो ब्याट्री जीवन। कुनै श doubt्का बिना, यदि तपाईं वायरलेस हेडफोनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यी एक राम्रो विकल्प हो।
यदि तपाईं डिजाइन, गुण र राम्रो मूल्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर खरिद गर्नुहोस् ट्रान्समार्ट ईन्कोर स्पन्की बुडहरू अमेजनमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
यो हो अनबक्सिंग पल, हाम्रो मनपर्ने पलहरू मध्ये हरेक पटक हामी प्रयास गर्न नयाँ उपकरण पाउँदछौं। ट्रोनसमार्ट ईन्कोर स्पुनकी बुडहरूको बक्समा हामीले कुनै आश्चर्य पाएनौं। पहिलो पृष्ठमा हामी बाकस देख्छौं, जुन शुरूबाट यसको उपस्थिति मनपर्दछ र समाप्त गर्दछ।
हेडफोन आफैंमा र उनीहरूको यातायात बक्स र चार्जरका साथै हामीसँग केहि छ। सामान्य रूपमा, चार्ज केबल, जुन यस अवस्थामा एक हो माइक्रो यूएसबी। एक केबल जुन सामान्य रूपमा यस प्रकारको ग्याजेटहरूमा छ सामान्य भन्दा धेरै छोटो.
अन्तमा हामी केहि धेरै उपयोगी लाग्छौं, र त्यो सबै निर्माताहरूले समाहित गर्ने निर्णय गर्दैनन्। ट्रोनमार्ट हेडफोन सुविधा दुई अतिरिक्त सेट रबर्स त्यो दुई फरक आकारको कानमा घुसाइएको छ। एक बिन्दु जुन हाम्रो प्रयोगकर्ता विशेषज्ञता खराब हुन को लागी आधारभूत हुन सक्छ वा यसको विपरित, यो उत्कृष्ट छ।
वर्तमान डिजाइन र शैली
डिजाइन कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक उपकरण हुन भर्खरका वर्षहरूमा भएको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक। यति धेरै, कि उच्च स्तरको प्राविधिक प्रदर्शन पनि प्रस्तुत गर्दै, एक उपकरण असफल हुन सक्छ यदि यसको शारीरिक उपस्थिति ध्यान आकर्षण छैन भने। यो न केवल राम्रो हुनुपर्दछ, हामीले यसलाई मन पराउनु पर्छ।
ट्रोनमार्ट हेडफोनका लागि विकल्प छन एक आधुनिक डिजाइन वर्तमान रेखा द्वारा प्रेरित। सु बक्स गोल छ, र हामी यसको माथिल्लो भागमा केही समाप्त भएको देख्दछौं कालो र खरानी टोनमा फ्रेमहरू कार्बन फाइबरको सम्झना दिलाउँदछन्। एक आकर्षक उपस्थिति जुन हामीले बजारमा फेला पार्न सक्ने अन्य धेरै मोडेलहरूका बीच ध्यान आकर्षित गर्दछ।
El खोल्ने प्रणाली जुन यो पनि छ धेरै मूल। हामीले हेड्यौं कि केहि हेडफोनको कभरहरू खोल्न गाह्रो हुन्छ। र साथै अरूहरू जसको बन्दोबस्त केही हदसम्म असुरक्षित र कमजोर छ। एक बटनको पुशमा ट्रान्समार्ट स्पन्की बुडहरू खुल्छन् कि हामी यसको पक्षमा पाउँछौं। र हेडफोनहरू हटाउन सक्षम गर्न, बटन थिचे पछि, हामी यसको ढकनीलाई छेउमा स्लाइड गर्न पर्छ। कुनै श doubt्का बिना, केहि धेरै प्रयोगात्मक र सुरक्षित प्रणालीहरू जुन हामी प्रयास गर्न सक्षम भएका छौं।
के तपाई यी हेडफोनहरू मन पराउनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र ट्रान्समार्ट ईन्कोर स्पन्की बुड किन्नुहोस् अमेजनमा।
एर्गोनोमिक्स र अधिक
यसको तर्फ, खुल्ने बटनको अतिरिक्त, छ चार्ज पोर्ट, जुन माइक्रो USB हो। र हामी पनि देख्छौं चार एल ई डी, जुन हामी लिटिएको देखेर निर्भर गर्दछ, हामीलाई चार्जको स्तर बताउनुहोस् बक्स बाट कुनै तत्व अधिक छैन, र कुनै तत्व कम छैन, यस्तो देखिन्छ कि सबै कुरा छ, र सबै कुरा राम्रोसँग अवस्थित छ। बक्स जेब वा झोलामा बोक्न सजिलो छ।
यदि तपाईं हेर्नुहुन्छ हेडफोनकानबाट बाहिर रहेको भागमा हामी देख्छौं बक्सको जस्तै फिनिश। एक विवरण जसले सेट राम्रो देखिन्छ र ढक्कन खोल्दा सुन्दर हुन्छ। एक प्लास्टिक सतह जुन छ सहज स्पर्श टेक्नोलोजी र यसको साथ पल्सेशनको अनुसार हामी आवाज सहायक सक्रिय, वा गीत मौन गर्न सक्छौं, उदाहरणका लागि।
हेडफोनको मुख्य भाग हो मैट कालो प्लास्टिकको बनेको। एक सामग्री जुन राम्रो देखिन्छ प्रतिरोधी र त्यो पनि गन्ती हुन्छ धेरै नरम रबरी फिनिशको साथ र स्पर्श को लागी रमाईलो। तिनीहरू पनि एक छ एर्गोनोमिक डिजाइन जुन कुनै जस्तो फिट हुँदैन कानमा यसलाई व्यावहारिक रूपमा असम्भव बनाउनाले उनीहरूको लागि दौडँदै वा जम्पि fall पनि खस्नेछ। एक रबर भाग को लागी धन्यवाद जुन भित्री भागमा इयरपीसबाट फैलिएको छ, पकड उत्कृष्ट छ। यसले तिनीहरूलाई जिम र बिहानको रनको लागि आदर्श साथी बनाउँदछ।
यो पनि याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूसँग छ IPX5 प्रमाणीकरण। तिनीहरू के हुन् भनेर पसिना वा वर्षाको कारण splashes प्रतिरोधात्मक। हामी तिनीहरूको खेल बाहिर अभ्यास गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं बाहेक बाहिर तिनीहरू डराउँदछन् भन्ने डर बिना।
शक्तिशाली ध्वनि र अधिक
हेडफोनले वास्तवमै के प्रस्ताव गर्नुपर्दछ भन्नेमा हेर्दै हामी यो भन्न सक्दछौं उनीहरूले प्रदान गरेको आवाज एक धेरै राम्रो तहमा छ। हामीले केहि याद गरेका छौं वास्तवमै शक्तिशाली बास, यस प्रकारको उपकरणमा प्रयोग गर्न गाह्रो छ। र तिगुनी आवाज धेरै स्वच्छ। सामान्यतया, ध्वनी सेक्सनले धेरै राम्रो नोट पाउँदछ, र हेडफोनमा यो राम्रो समाचार हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो भोल्युम स्तर यसले प्रस्ताव गर्दछ। हामी औसत भन्दा माथिल्लो स्तरमा छौं, केहि महत्त्वपूर्ण कुरा यदि हामी सडकमा हिंड्दा कुनै अवरोध बिना हाम्रो संगीत सुन्न सक्षम हुन चाहान्छौं भने।
मोडेल एनकोर स्पन्की बुड्स
हेडफोन ब्याट्री क्षमता M० mAh x २
ब्याट्री क्षमता बक्स / चार्जर M०० एमएएच (full पूर्ण शुल्क सम्म)
कुराकानीमा अवधि4घण्टा
संगीत / खेलको साथ अवधि १ देखि hours घण्टा
समय कुर्नुहोस् 80 घण्टा
हेडफोन चार्जिंग समय १ देखि १ र १/२ घण्टा
चार्ज समय बक्स / चार्जरe१ र १/२ देखि २ घण्टा
फ्रिक्वेन्सी दायरा २.2.400०२G गीगाहर्ट्ज - २.2.480०GHz
बक्स / चार्जर आयाम 71.7 x 34.4mm
वजन सेट गर्नुहोस् 69.8 ग्राम
मूल्य 37.67 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् Tronsmart एनकोर स्पन्की बुडहरू
पेशेवर र ट्रान्समार्ट ईन्कोर स्पन्की बुडको विपक्ष
El केस वा बक्स / चार्जर आँखाको लागि आकर्षक छ र यसको एक विधि छ सुरक्षित र प्रभावकारी बन्द.
El केस र हेडफोन डिजाइन आधुनिक र ट्रेंडी छ, र योसँग गुणस्तर र प्रतिरोधी सामग्री छ।
El जोडी छिटो र तत्काल छ जब हामी केसबाट हेडफोनहरू लिन्छौं।
उनीहरूसँग छ एर्गोनोमिक डिजाइन यसले हामीलाई खस्न वा स्लिप गर्न धेरै गाह्रो बनाउँछ।
लक करने योग्य केस
आधुनिक र मूल डिजाइन
La लोड क्षमता र अवधि, हामी उनीहरूलाई प्रयोगमा निर्भर गर्दछ, यो हुन सक्छ सीमित.
El भाग को आकार बाहिर छोडियो कान बाट यो देखिन्छ धेरै ठुलो.
कम लोड क्षमता
TRONSMART एनकोर स्पन्की बुडहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ट्रोनमार्ट एन्कोर स्पन्की बुड हेडफोन समीक्षा